किन हुन्छ पाइल्स ? पाइल्सको सही उपचार के हो त ? जानी राखौं - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»किन हुन्छ पाइल्स ? पाइल्सको सही उपचार के हो त ? जानी राखौं
By मनिषा थापा on १२ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:५३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
दिसा गर्दा रगत आउँछ, मासु पलाएको छ, दुख्छ, फाटेको, फुलेको या सुन्निएको छ, मलद्वार चिलाउँछ लगायतका समस्या आम मानिसमा भएको सुनिन्छ । कसैको त पीप बग्छ, अंगुरका झुप्पाजस्तो पलाएको छ, रातो डल्लो छ भन्ने सुनिन्छ । यही रोग नै पायल्स हो । कसैलाई यो रोग लाग्दा रगत आउछ भने कसैलाई आउदैन ।